Nolosha caruuraha Iswiidhan kelinimada ku yimid - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Nolosha caruuraha Iswiidhan kelinimada ku yimid
La daabacay onsdag 23 november 2016 kl 07.00
Sohail Pirooz oo ag taagaan iskuulkiisa. sawir: Ulla Engberg/SR
Todobaadkan iyo ka soo socda waxaan halkan ku soo qaadan doona wareeysiyo ay Raadiyaha Iswiidhan la yeelatay caruuraha waddanka kelinimada ku yimaada. Waxaanu booqanay dhowr magaalood oo kala duwan si aan ugu dhawaanu nolosha caruurahan. Waxaa ugu horeeya Sohail Pirooz oo ku sugan waqooyiga Iswiidhan.
Saacadu waaxaay gaadhay sideedi subaxnimo. Waxaanu ku suganahay tuulada Krokom ee waqooyiga Iswiidhan.
Sohail Pirooz ayaa ah da´da 15 jir. Wuxuu ka mid yahay caruuraha kelinimada waddanka ku yimid. Sohail ayaa ka soo qaxay waddanka Afqanistaan si uu nabad ugu noolaado halkan. Wuxuu hadda la deganyahay lix dhalinyaro oo iyaguna wadamadoda ka soo qaxay. Sida Fida ayaaneey weli qaangaadhin.
Subaxnimadan goor hore ayuu soo kacay si aanu uga habsaamin casharka ugu horreeya.
Dibada waxaa yaala baraf faro badan, hasayeeshe ayuu sheegay Sohail, in waddankiisaba ka jiro baraf, hasayeeshe in aanu aad ugu badneeyn sida Iswiidhan halkuu barafku 5 ilaa 6 bilood ka dao sannad walba.
Sohail ayaa sannadkii hore bilaabay waxbarashada lagu talo galay dadka waddanka ku cucub, föberedelseklass, hasayeeshe ayaa bilo ka dib loo gudbiyay fasal caadi ah oo ay dhigtan caruuraha waddanka ku dhashay amba muddo dheer Iswiidhan degana. Sohail ayaa islamarkiiba bilaabay in uu caruuraha fasalka 8:aad dhigta la qaato casharada xisaabta iyo jimicsiga.
-Waxaan ugu jecelahay casharada xisaabta, waxaanan doonaya in aan doorto waxbarasho ay xisaab badani ku jirto mustaqbalka, ayuu sheegay Sohail Pirooz
Waagu Sohail Iswiidhan yimid wuxuu ku yimid dharkii uu gashana keliya. Hasayeeshe ayuu sheegay in uu af- ingiriisi wanaagsan uu ku hadli karayay islamarkaas na uu gacan caawimaad ah ka helay godmankiisa, wakiilka taageera caruuraha kelinimada waddanka ku yimaada.
Laakin ayuu sheegay in uu hadda yara ilaabay ingiriisigii madama uu badanka xooga saarayo in uu barto afka iswiidhishka ah.
-Weli waan fahma ingiriisiga markaa aan maqlo, laakin hadalka ayaa igu yara adag, ayuu sheegay.
Wuxuu hadda rajeeynaya in u ka baxo fasalka 9:aad si uu sannadka dambe u bilaabo iskuulka sare ee gymnasiet. Tan ayaa keentay in uu muddo badan ku mashquulsanyahay tacliintiisa. Xitaa wuxuu marmarka qarkood ilaaba dhibaatoyinkii ka soo gaadhay Afqanistaan, ayuu sheegay.
-Kuma fekero dhacdooyinkii waddankeeyga. Sido kale goorta jawaabta sharciga degaanasha aan heli doono waxaan ku mashquulsanahay in aan barto afka iswiidhishka ah.
Xilliga firaaqahiisa wuxuu yecelyahay in uu asxaabtiisa la joogo oo kubad la ciyaaro. Hasayeeshe tan ayaan surtogal hadda u noqon kari waydeey Sohail madama uu xagaagi ina soo dhaafay ku dhaawacmay ciyaar kubad ah.
Hasayeeshe ayey Katarina Lindgren oo ah wakiilka Sohail markeey aragtay sameeynta ay dhacdodani ku yeelatay Sohail caawisay si uu u bilaabo ciyaarta golfka loo yaqaano.
-Aaad ayaan u jeclahay ciyaartan ayuu sheegay Sohail oo bishi hal jeer goobta lugu ciyaaro golfka taga.
Sohail ayaa sannadkii hore Afqanistaan kaga yimid waliidkiis. Ilaa waagaas na xidhiidh amba war ka haynin meel ay maanta joogaan. Waa ku dhib Sohail in uu ka sheekeeyo wixii halkaas ka soo gaadhay.
-Wey igu adaktahay laakiin waxaan isku dayaya in aan maskaxdeeyda ku mashquulin, ayuu sheegay Sohail Pirooz oo aan ogeeyn in u sharci ka heli karo Iswiidhan iyo in kale.